Aluminium Foam, yethusi Foam, Nickel Foam, Noise Isithiyo - Beihai
Sinikeza ngomkhiqizo ophakeme
Incazelo Yomkhiqizo I-Foam Foam isetshenziswe kabanzi njengokulungiswa kwezinto ezithwala ibhethri, i-electrode substrate yebhethri ye-lithium ion noma uphethiloli, iseli le-cellcatalyst carriers nezinto zokuvikela i-electromagnetic. Ikakhulukazi igwebu lethusi yinto eyisisekelo esetshenziswa njenge-electrode yebhethri, enezinzuzo ezithile ezisobala. Isici Somkhiqizo 1) i-foam yethusi inezindawo ezinhle kakhulu zokushisa, ingasetshenziswa kakhulu ezintweni zezimoto / zikagesi nezikagesi zeradi yokuhambisa ukushisa ...
Incazelo Yomkhiqizo I-foam yensimbi edabukisayo uhlobo olusha lwezinto zensimbi ezinesakhiwo esinenombolo ethile nosayizi wepore kanye ne-porosity ethile. Indaba inezici zokuminyana okuncane, indawo enkulu ethize, ukumuncwa kwamandla okuhle, amandla aphezulu athile nokuqina okuthile. Umzimba wembobo unamandla okushintshanisa ukushisa namandla okusabalalisa ukushisa, ukusebenza kahle kokumunca umsindo, nokuqina okuhle nokuqina. Foam metal nge di ...
Iphaneli ye-Translucent Aluminium Foam ayisindi ngokweqile futhi ivumela ukukhanya kudlule.Kwaziwa nangokuthi amaphaneli wokuhlobisa. Okuyingqayizivele futhi okubonakalayo okumangazayo kwempahla engaphezulu kwesikhumba esijulile Inikeza ubuhle, amandla kanye nezixazululo ezingasindi ze-acoustic zamathuba ahlukahlukene wokudala.Ubukhazikhazi bayo bensimbi obuhlanganiswe nokuqedwa okuhlukahlukene kungenye yohlobo lomhlaba wonke. Sekusetshenzisiwe kabanzi emikhakheni eminingi efana: I-Wall Wall Cladding, i-Interior Wall Cladding, i-Ceiling Tiles, i-Rest ...
Incazelo Nezici Zokukhiqiza Igwebu le-aluminium evulekile isho igwebu le-aluminium elinama-pores angaphakathi axhunyiwe, ngosayizi wepore ongu-0.5-1.0mm, i-porosity ka-70-90%, kanye ne-porosity ka-55-65%. Ngenxa yezici zayo zensimbi nokwakheka kwayo, igobolondo le-aluminium eligobhoza linokumunca umsindo okuhle kakhulu futhi limelana nomlilo, futhi alinabufakazi ngothuli, lilungele imvelo futhi alinamanzi, futhi lingasetshenziswa njengezinto zokunciphisa umsindo isikhathi eside ngaphansi kokusebenza okuyinkimbinkimbi izimo. ...
Incazelo Yokukhiqiza Iphaneli elihlanganisiwe le-Aluminium Foam enemabula eliyitshe elisindayo lemvelo elisikwe ngo-3mm ungqimba oluncane, olucutshunguliwe lwahlanganiswa ne-aluminium ene-ultralight foamed. Akugcini nje ngokugcina ukuqina kwephaneli kepha futhi nesisindo samatshe ethu yi-ultralight, ukuze isetshenziswe kalula kwimvelo enhlobonhlobo efana nengaphakathi, ingaphandle, isitsha (isitimela), isikebhe noma isikebhe somkhumbi, izinto zekheshi, ifenisha nezinto zokwakha kabusha izakhiwo ezindala. ...
Incazelo Yokukhiqiza Ukuze ufinyelele umphumela omuhle kakhulu wokumunca umsindo ngaphandle, onguthelawayeka, ujantshi, njll., Sithuthukise i-AFP ekhethekile esetshenzwe. Bhoboza izimbobo njalo ku-AFP njengengxenye engu-1% -3%, ngokusebenza kahle kokumunca umsindo nezinga eliphezulu lokumunca umsindo. Ibhodi lokuvikela umsindo elenziwe ngebhodi le-foam sandwich sandwich, u-20mm ubukhulu, ukwahlukanisa umsindo 20 ~ 40dB. Izinga lokumuncwa komsindo elilinganiswe ngendlela yokuma kwegagasi elingu-40% ~ 80% ebangeni le-1000Hz kuya ku-2000H ...
Imininingwane Yomkhiqizo Iseli Elivaliwe le-Aluminium Foam Panel Isici Esiyisisekelo Ukwakheka Kwamakhemikhali Ngaphezulu kuka-97% Uhlobo Lweseli le-Aluminium Isisindo Esivaliwe 0.3-0.75g / cm3 Isici se-Acoustic ukumuncwa kwe-Acoustic Coefficient NRC 0.70 ~ 0.75 Isici Semishini Amandla weTensile 2 ~ 7Mpa Amandla acindezelayo 3 ~ 17Mpa Thermal Thermal Faka i-Thermal conductivity 0.268W / mK Iphuzu lokuncibilika. 780, Isici Esingeziwe Amagagasi kagesi avikela ikhono Ngaphezu kwama-90d ...
Izici zomkhiqizo 3mpa, 17mpa Amandla okugoba 3mpa, 15mpa Amandla akhethekile: Ingathwala ngaphezu kwezikhathi ezingama-60 isisindo sayo sokumelana noMlilo, Akukho ukushisa komlilo, Akukho ukumelana negesi enobuthi Ukugqwala, impilo ende yenkonzo ...
I-BEIHAI Composite Materials Group yiqembu elikhulu elinabasebenzi abangaphezu kuka-2300 abanezimboni ezi-6 ezihlukene. Sikhethekile ekukhiqizeni izinto zokwakha ezahlukahlukene iminyaka engaphezu kwengu-26.
Siyinkampani yokuqala e-China esungule ifektri yayo ekhiqiza i-AFP (i-Aluminium Foam Panel) .Sineqembu lomnyombo wobuchwepheshe abanamasu aphezulu kanye nesipiliyoni sokusebenza sangempela seminyaka eminingi.
Izinto okulula ukuzisebenzisa kusitolo se-inthanethi sodumo lwe-aluminium foam
Akungafani neze nokwakhiwa kwesitolo samakhekhe esijwayelekile? Yebo, savulwa ngoMeyi kulo nyaka isitolo somqondo seHollyland LAB esikuvumela ukuthi uzulazule emkhathini ngesitayela esisodwa seFuturistic, umklamo wesikhala esimpunga ngesiliva, isikrini esikhulu esipholile nokufakwa kobuciko, ama-dessert anezimo ezishintshayo Yini edala ukuthi ...
Porosity futhi Wugqinsi Foam Metal
Ngo-2015, izinto zokwakha amagwebu eziyinhlanganisela zensimbi zakhiwa ngokuhlanganyela ngabaphenyi abavela eDST naseNew York University Institute of Technology. Inobuningi be-0.92 g / m3 kuphela futhi iyakwazi ukuntanta emanzini. Ngokumangazayo, le nto inamandla anelisayo ngenkathi izuza isisindo esincane, futhi i-si yayo ...
Kuyini igwebu lethusi nokusetshenziswa kwalo?
Igwebu lethusi yinto entsha esebenza ngemisebenzi eminingi enenombolo enkulu yezimbobo ezixhunyiwe noma ezingaxhunyiwe ezisatshalaliswa ngokulinganayo kumatrix. Igwebu lethusi linokuqhuba okuhle nokungathambeki kahle. Inezindleko eziphansi nokuqhuba okungcono kune-nickel foam futhi ingasetshenziswa ukulungisa i-anode yebhethri (yenethiwekhi) m ...
Kuyini Metal Foam? Ukuhlukaniswa kwensimbi yensimbi nezicelo
I-Metal Foam ibhekisa ezintweni ezikhethekile zensimbi ezine-foam pores.Ngezici zayo ezihlukile zokwakheka, i-foam yensimbi inochungechunge lwezinzuzo ezinhle, njengokuqina okuphansi, ukusebenza okuhle kokufakwa kokushisa, ukusebenza okuhle kokufakwa komsindo namandla okuthola amaza kagesi. Iphakeme ...